कोरोनाले दिएकाे अवसरः विदेश जान नपाएपछि देशमै यस्तो ब्यापार – KhabarTime
बैदेशिक रोजगारी कुवेतबाट मार्च ६, २०२०मा नेपाल बिदामा आएको केहि समय मात्र भएको थियो प्रेम बहादुर श्रेष्ठ को । केहि महिना छोरी होस्टेल बाट आएकोले उनीसँग बिताउनु भयो । यतिकै मा चैत्र ११ गते देखी नेपाल मा बन्दाबन्दी सुरु भयो कोरोना देखिन थाल्यो । स्कूलहरु बन्द हुन थाले, करीब दुइ महिनाको बिदा थियो उहाको ।
लामो समय यतिकै बित्यो कहिले सुतेर कहिले यतिकै घरायसी कामहरु गरेर, कहिले उता च्यामासिंह तिर का गाउ हरु घुमेर लामो समय यसरी बस्नु धेरै पट्यार लाग्दो हुने । करीब १७ बर्ष भएको थियो उहाको बिदेशको बसाइ कहिले बिदा मा नेपाल आउने परिवार भेट्ने गर्नु हुन्थियो ।
उहाको भाइ याम श्रेष्ठले भने करीब डेढ साल अघि नै कुवेतबाट फर्केर भक्तपुरको नङ्खेल करीब ९ महिना अघि खाजा घर को ब्यवसाय सुरु गरिसक्नु भएको थियो । कहिले भाईको खाजा घरमा कहिले फ्रोजन मम बनाएर सहयोग गर्दै दिन बिताउदै आउनु भएको थियो । भाइ याम श्रेष्ठ कुवेत मा अरबिक होटेलमा कुक हुनुहुन्थ्यो । २०१९ कुवेतबाट फर्केर कुखुरा पालन पनि गर्नु भयो याम श्रेष्ठले ।
शीप र लगन भएको मानिसलाई कहि गएर पनि काम गर्न जागर चल्ने गर्दछ, यस्तै सोच राखेर उहाँ र उहाँको भाइ याम श्रेष्ठ र नजिकको नातेदार दाई पर्ने मिलेर यही सेप्टेम्बरको पहिलो हप्तादेखि फेरि नयाँ काम गर्ने सोच राख्नु भयो । एक त बन्दाबन्दी, बिदेशको बिदा सकिसकेको भए पनि यो बन्दाबन्दीले गर्दा बिदेश फर्किन पाउनु भएन । अब गर्ने के त भनेर उहाहरुको सल्लाह, सहमति र सहकार्यमा उहाहरुले नयाँ सोच लिएर चाउमिन बनाउने मसिन खरिद गर्ने सोच्नु भयो र सुरु भयो उहाँहरुको नयाँ ब्यावसाय । त्यसो त भाइको खाजा घरमा सबै सामान उपलब्ध नै थियो केवल मेसिन थिएन । त्यो मेसिन पनि उहाँहरुले एक लाख पाँच हजारमा काठ्मान्डाैंको टेकुबाट खरिद गर्नु भयो र मेसिन र भाडा गरेर करीब डेढ लाखको खर्च भयो भन्नु हुन्छ प्रेम बहादुर श्रेष्ठ ।
अब सुरु भयो नयाँ दैनिकी उहाहरुको, यो बन्दाबन्दीले उहाहरुलाई अवसर दियो । तर उहाहरुले ब्यावसायिक हिसाबले दर्ता गर्न पाउनु भएको छैन । चाउमिन बनाउदा पिठो, पानी मात्र चाहिने हुनाले, ती सबै आफैसँग भएकोले सहज भएको र यस्को लागि करीब दुई बोरा पिठो को रु २००० पर्ने गरेको र अहिले सम्म १४० प्याकेट बनाएर बेचिसकेको र एक प्याकेटमा ८०० ग्राम हुने र रु. ५५ पर्ने गरेको र दैनिक १५० देखि २०० प्याकेट बनाउने गरेको बताउनु हुन्छ प्रेम बहादुर श्रेष्ठ ।
अहिले पुर्ण रुपमा शुरु नगर्दासम्म कम पैसामा बेच्ने गरेको र बिशेष गरि यो चाउमिनको प्याकेट साना साना खाजा होटेलहरुमा नै बढी बिक्री हुने गर्दछ । हुन त आजकल दैनिक रुपमा नै यो खाजाको रुपमा धेरै नै खाइने हुनाले यसले चाडै नै बजार लिने कुरामा आशावादी रहौ हामी पनि । नेपालमा पनि प्रेम बहादुर श्रेष्ठ जस्ता कयौ बिदेशबाट बिदामा नेपाल आएर जान नपाएकाहरु भने कोहि कुखुरा पालन गर्दै छन भने कोही चाउमिन फ्याक्ट्री चलाउदै छ्न ।
हेर्नुस केहि तस्विरहरूः
कोरोनाको कहरमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउनु दुर्भाग्य – अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेल (भिडियो अन्तर्वाता)
डा. गोविन्द केसीलाई पनि किन Ebru Timtik जस्तै मृत्य तर्फ धकेलिँदैछ सरकार?